> Resource> iPad> Olee na-etinye Movies on iPad
M ọhụrụ a na m ọhụrụ na iPad ... M na-eche bụ n'ebe ọ bụla ụzọ na-etinye na fim na gị iPad? Na-emekarị m ọkụ m fim paireti n'ọnụ mmiri ma mgbe ọ bụghị nri usoro ... ọ bụla pụrụ inyere m aka ma ọ bụ nye m a legit Ntụgharị?
Ee, ị na nri. Ọ bụ eleghị anya n'ihi na ị na tọghata na-etinye ihe nkiri na iPad. Ihe niile ị chọrọ ime bụ ka nwere ihe iPad nkiri transfer ngwá ọrụ dị ka Wondershare TunesGo. Ọ bụ dị na PC na-agba ọsọ Windows os. Ngwá ọrụ a bụ otú na-enye aka na ọ nwere ike tọghata ọtụtụ video formats, dị ka 3GP, AVI na FLV, ka iPad enyi na enyi n'anya. Na ngwá ọrụ a, gị mgbe mkpa itinye fim gị iPad na-eri nke adịkwa ochie songs. Ọ pụtara na ọ dịghị songs ga-efu mgbe ndị ọhụrụ na-kwukwara.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata otú ịgbakwunye nkiri na iPad si Mac, i nwere ike ịgbalị Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-arụ ọrụ na n'ụzọ yiri nke ahụ dị ka Wondershare TunesGo na-eme.
Download a iPad nkiri transfer ngwá ọrụ na-etinye vidiyo na iPad
Otú e si etinye ihe nkiri na iPad
Dị ka ọnọdụ gị, na-ahọrọ nri mbipute a ngwá ọrụ. Ke ibuotikọ emi, anyị na-aga na-agbalị Windows mbipute a ngwá ọrụ. Mgbe echichi, ị nwere ike na-agba ọsọ ngwá ọrụ a na PC gị. Mgbe ahụ, na-ahapụ 'nwere a lee anya na mpio njikọ popping na PC gị.
Cheta na: Wondershare TunesGo akwado iPad Obere, iPad na Retina ngosi, iPad 2. Tulee ihe ọmụma banyere akwado iPads na iOS ebe a.
Nzọụkwụ 1. Jiri eriri USB jikọọ gị iPad ka PC
Jikọọ gị iPad ka PC site na iji eriri USB. Ngwá ọrụ a ga-chọpụta gị iPad ka anya dị ka ọ na-ejikọrọ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ gị iPad showsup na isi window.
Cheta na: a na ngwá ọrụ nwere ike tinye fim, egwú videos, TV na-egosi, iTunes U, .etc gị iPad. Ebe a, anyị na-na fim dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ 2. Nịm video àgwà n'ihu na-agbakwunye nkiri na iPad
Tupu converting fim, ị nwere ike ịtọ a video mma. Na ekpe kọlụm, pịa "mgbasa ozi". Mgbe ahụ, pịa "Movies" na-egosi ihe nkiri ahụ window.
Mgbe ahụ, ayak 'na-abịa n'elu nri akuku nke window. Pịa 2nd icon iji bugote ndọpụta ndepụta. Họrọ "Setting" na "Video Nchigharị". Họrọ a video àgwà ụdị na pịa "Ee".
Nzọụkwụ 3. Tinye nkiri na iPad
Ugbu a, ị pụrụ ịmalite tinye fim. Pịa "Tinye". Mgbe faịlụ nchọgharị window Pop elu, ịnyagharịa ebe ị na-azọpụta ihe nkiri. Tinye gị chọrọ fim gị iPad.
Mgbe ị na-a dee na-agwa gị na kwukwara na fim na-adịghị iPad enyi na enyi formats, i nwere ike inwe ihe nkiri converted. Pịa "Ee" na-amalite akakabarede. Jide n'aka gị iPad ejikọrọ n'oge akakabarede na transfer usoro.
Ọfọn, nke ahụ bụ dum nkuzi banyere otú e si etinye vidiyo na iPad. Nke a iPad video transfer ngwá ọrụ na-eme nke ọma na-etinye ọ bụla video gị iPad, adịghị ya? Ntak ibudata ngwá ọrụ a na-enwe na-agbalị?
Olee otú mmekọrịta Photos ka iPad
Atụmatụ na usoro nke AVCHD on iPad
Olee otú Iji Hichapụ ọ bụla ngwa site na iPad-adịgide adịgide
Olee otú Play Torrent on iPad (iPad 4 gụnyere)